Uma unanoma yimiphi uhlelo Ukushisa ukuze usebenze kahle, kubalulekile ukuba ngezinye izikhathi ukuhlela ukuhlolwa isimiso futhi yokuhlanza. Lokhu ikakhulukazi kusebenza ngabanye bafudumale izinhlelo lapho ukusetshenziswa izimo imishini kunalokho eqinile. Siwasebenzise endlini uhlelo Ukushisa kuyadingeka ikakhulu lapho lisetshenziswa njengedivaysi kokupholisayo eliphansi amanzi kanzima. Zonke ukungcola kanye limescale luhlala njengoba izingxenye sangaphakathi boilers futhi amapayipi.
ukungcola okunjalo kungaba kakhulu ukunciphisa ukushisa imishini yokudlulisa. Siwasebenzise endlini uhlelo Ukushisa kusiza ukuvimbela ukungcoliswa imishini inqubo Ukushisa, kanye kunomthelela ukusetshenziswa kwesikhathi eside ukushisa kanye amapayipi.
Ngokuyinhloko lezi inqubo yenziwa esebenzisa futha kwegazi futhi kubhavu nge ngamanzi uketshezi ekhethekile. I futha isitsha axhunyiwe ohlelweni Ukushisa, yokuhlanza uketshezi enikeziwe kuwo. Siwasebenzise endlini uhlelo Ukushisa Kwenziwa nje aphume ngeke wageza wonke udoti. Mhlawumbe, inqubo kuyodingeka ichithe ama izikhathi ezingaphezu kwesisodwa. Khona-ke, uketshezi ukugeza amuncekela futhi isistimu siyakazwe ngamanzi ashisayo. Khona-ke amanzi akhanywa futhi busuka isixazululo, ehlanganisa odongeni engaphakathi izakhi uhlelo ungqimba anticorrosive. Ngemva tube wageza, ukuwasha kwabebhange kukhiqizwa.
Amanzi asetshenziswa siwabeka ukuze siwasebenzise endlini uhlelo, kungenzeka ukwengeza chlorine okuyinto disinfects zonke evele yangaphakathi. Njengoba uketshezi esetshenziselwa ukuhlamba ikhambi acid. Ngemva kubalulekile ukusebenzisa uhlelo in uketshezi okuyinto neutralizes izinsalela acid.
Kahle kahle, uxubha uhlelo Ukushisa kufanele kwenziwe njalo eminyakeni 3-4. Izindlela samanje bahlanza zonke izifunda kohlelo. Khona-ke kufanele sizame ugcwalise uhlelo amanzi izinga. Ngaphambi Ukushisa ngamunye isizini yenziwa ngesikhathi esifanayo ngamanzi uhlelo lapho amanzi abakhwabanisi akudingekile.
Ukuphathwa kanjalo kudinga cishe noma yikuphi uhlelo Ukushisa, ngisho emoyeni. Air Ukushisa izinhlelo olusungulwe eyenziwe ukushisa ugesi, ezisetshenziswa for uwoyela noma igesi. Ngo isimiso esinjalo akukho ngamanzi afudumele futhi emoyeni. Ngokuvamile konke lokhu ukwakha isetshenziselwa amalahle izikhala ezinkulu: ukuzivocavoca, izindawo zezimboni, emafektri, amagalaji kanye nezinye izikhungo.
Inzuzo main kwalesi simiso ukonga, ngoba ukusebenza kwako eliphezulu kakhulu, futhi emoyeni evuthayo ekamelweni ingena ngqo. Thermostat kungase kushintshwe, ngakho igumbi Kulula ukulondoloza izinga lokushisa oyifunayo. Ayikho kokupholisayo ezengeziwe, ongaphakeme inertia ezishisayo yenza Ukushisa iyathandwa.
Kodwa lapha futhi kudingeka yokuhlanza ngezikhathi ezithile Amapayipi sikaphalafini nokuhlunga. Amandla omlilo ekamelweni heater futhi kumele ngezikhathi bahlanza kusuka umule noma ezinye imali. Ukuhlanza njalo kwesimiso esinjalo kuyinto kusheshe futhi kube lula, njengoba amapayipi ukugeza futhi radiators, akudingekile (bamane kungaqali).
Chisinau - eMoscow: ibanga kanye nohambo isikhathi. Indlela ukukhetha indlela engcono kakhulu ukusuka Chisinau eMoscow?